Muxuu C/raxmaan C/Shakuur uga baaqday Shirka Garoowe? – Banaadir Times
Muxuu C/raxmaan C/Shakuur uga baaqday Shirka Garoowe?
By banaadir 2nd January 2021 42 No comment
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka baaqday ka qeyb-galka shirka ay isugu tageen Mucaarad & Muxaafad ee ka socda Magaalada Garoowe.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa faah faahin ka bixiyay sababaha keenay in uu ka baaqdo shirkaas ayaa sheegay in aysan muhiim aheyn in Mucaaradka oo dhan ay tagaan shrkaas, sidaas daraadeed uu isaga Muqdisho u joogo in qaladaadka ay galeyso dowladda uu u sheego.
Waxaa uu sheegay in Shirka Magaalada Garoowe ay ka joogaan saaxiibo badan oo isugu jira Mucaarad & Muxaafad, isla markaana uu isaga uga baaqday in uu ilaaliyo dowladda waxna u sheego markii ay wax qaldan ku dhaqaaqdo.
Dalalka Khaliijka oo dhowr qodob ku heshiiyey
Guddiga Xallinta khilaafaadka & Cabashooyinka Doorashooyinka Puntland oo la Magacaabay